HomeAqoonta SariirtaXOG XASAASI AH: 5 Sabab Oo Keenta Cabsida Kulanka Sariirta Lamaanaha.
Waligaa ma dareentay Baqdin aad ka qabto kulanka sariirta? Kaligaa Ma ahan dhibaatadu, Hadaba aan halkan kaga hadlano warbixintan xasaasiga ah.
Waa maxay cabsida Kulanka Sariirta?.
Cabsida Galisa kulanka sariirta ayaa ah xaalad qofka ku adkaata in uu qalbigiisa u furo waliba la xidhiidho qof kale gaar ahaan marka xidhiidhka fiican ku tiirsan yahay kalsooni, isku xidhnaan, kalgacal iyo waliba in labada qof midba midka kale ku tiirsanaado.
Cabsida kulanka sariirta ayaa dhici karta sabab la xidhiidha awood la’aanta in uu qofk qalbigiisa u furo qofka kale sida ay sheegeen Dhakhtarada Cilmi naftisa iyo waliba in uu qofku awood u waayo in uu jidh ahaan ula xidhiidho qofka kae.
Waa Maxay Sababaha Keena Cabsida Kulanka Sariirta?
Waxa aan halkan idiinku soo gudbin doonaa sababaha ugu waaweyn ee keenta cabsida kulanka sariirta ee lamaanaha is qaba.
Baqdinta uu qofku dareemayo in uu waayo qofka uu jecelyahay ayaa door weyn ka ciyaarta cabsida kulanka sariirta tusaale ahaan marka uu lamaanaha midkood ka qiimo hooseeyo midka kale waxana uu qofka laga qiimaha sareeyo ka cabsanayaa in uu waayo qofka kale sabab la xidhiidha kulanka sariirta taas oo keenaysa cabsida.
Cabsida kulanka sariirta ayay sabab u tahay qaabka jidhka ee xun tusaale ahaan hadii jidhka gabadha ama Ninka midkood uuna ku jirin xaalad fiican, arintan ayaana aad u yar in ay dhacdo inta badan hadii ay noqoto in uu Ninku leeyahay calool aad u weyn sidoo kale gabadhu ayna lahayn jidh qurux badan taas aayan keenta cabsida kulanka sariirta.
3.Khirbad xun Oo Kulanka Sariirta Horay Kuu Soo Martay:
Xidhiidhada hore ayaa saamayn ku yeelata xidhiidhada cusub ee ku soo mara, Saamyn xun, Awood la’aanta kulanka sariirta iyo waliba cabsida kulanka sariirta waa arimaha ugu weyn ee keena in Ninka ama gabadhu ka cabsadaan kulanka sariirta.
4.Dhibaatooyin Aan La Xalin Oo Xidhiidhka Lamaanaha Ah:
Sababta dheeraadka ah ee loo dareemo cabsida kulanka sariirta waa dhibaatada ay ka midka yihiin.
Fashilka xidhiidhka lamaanaha is qaba iyo in ay awood u waayaan xalkiisa.
In la waayo ka go’naansho xidhiidhka lamaanaha ah.
Muranka joogtada ah iyo in labada lamaane midkood dareemo in uu khuurto ku hayo qofka kale.
Mid ka mid ah Sababata ugu weyn ee Cabsida kulanka sariirta ayaa ah kalsooni la’aanta labada qof marka loo eego in kalsoonidu tahay arin muhiim u ah guusha xidhiidhka lamaanaha.
U Gaar Ah Ragga: Sifooyinkan Ma Isku Aragtay, Hadii Ay Jawaabtu Haatahay Wax Jacayl Ah Uma Haysid Gacalisadaada.
5-tan Calaamad Hadii Aad Isku Aragtaan Jacaylkiina Waa Guulaystay, Waana Mid Xoogan